Blockchain News Janoary 7 2018 - Blockchain News
Mark Zuckerberg miantehitra amin'ny Bitcoin mba hanampy Manapariaka ny Facebook
Ny teknolojia bitcoin powering afaka manampy hanatsara Facebook amin'ny ho avy, Mark Zuckerberg hoe.
Izay tafiditra ao ny fanoloran-tena mba hanampy hamaha ny toerana ny 2018, ny mpanorina nilaza fa hijery ny fampiasana ny teknolojia vaovao mba tsy izany dia ho tena foibe.
Ny iray amin'ireo teknolojia dia bitcoin, hoy izy.
“Maro amintsika niondrana an teknolojia, satria mino isika fa afaka ny ho hery decentralizing izay mametraka fahefana bebe kokoa eo amin'ny vahoaka tanana. (Ny efatra voalohany teny ny iraka Facebook foana “manome ny olona ny fahefana”.) Tamin'ny taona 1990 sy ny taona 2000 ny, Nino ny ankamaroan'ny olona teknolojia dia ho decentralizing hery,” tamin'izy nanoratra tao anaty lahatsoratra lava.
“fa amin'izao fotoana izao…maro ny olona ankehitriny ihany no mino teknolojia centralizes fahefana fa tsy decentralizes izany.”
“Misy zava-dehibe manohitra ny fironana izany - toy ny fanafenana sy cryptocurrency - izay maka hery amin'ny rafitra foibe ka nataony indray eo an-tanan'ny olona. Anefa izy ireo avy amin'ny mety ho mafy kokoa hifehy. Liana aho handeha lalina sy mandalina ny tsara sy ratsy endrika ireo teknolojia, ary ny fomba tsara indrindra ampiasana azy ireo eo amin 'ny asa,” izy nanoratra.
Bank of Angletera tsy manana drafitra mba hanomboka cryptocurrency
Ny Banky Angletera dia nilatsaka drafitra mba hanomboka ny tenany nomerika vola tao anatin'ny olana momba ny fiantraikany eo amin'ny ara-bola rafitra.
Ny banky foibe U.K. ny FTAdviser nilaza fa manana “tsy misy amin'izao fotoana izao drafitra” mba hanomboka ny tenany cryptocurrency, fa mbola hanohy ny fikarohana ny lohahevitra.
Nilaza izany ny BoE nandatsaka ny drafitra ny ahiahy fa mety intsony ny vahoaka ara-barotra ny fampiasana kaonty banky sy hifindra hatrany ny nomerika BoE rafitra fandoavam-bola ho an'ny varotra sy ny fividianana ny entana. Ny hetsika faobe ho amin'ny BoE cryptocurrency mety hitarika ho amin'ny banky ara-barotra avy amin'ny vola nihazakazaka mba hampisambotra, niteraka “misafotofoto” ao amin'ny fitantanam, dia nanao hoe:.
Leveraged Bitcoin ETF nanolo-kevitra ny SEC
U.S. petra-bola mpitantana dia mikasa ny hanangana "leveraged" sy "no mitifitra ny mifanohitra" vola izay hitsangana – na lavo – indroa haingana toy ny vidin'ny bitcoin amin'ny nomena andro.
Direxion Asset Management LLC mikasa ny lisitra toy izany vokatra amin'ny Intercontinental Exchange ny NYSE Inc Arca fifanakalozana raha U.S. Fiarovana dalàna manome ny mihatohatoka, araka ny fametrahana ny fifanakalozan-kevitra tamin'ity herinandro ity.
Hatreto ny U.S. Fiarovana sy Exchange Commission nihena na hitafy mihazona ny tolo-kevitra rehetra.
Overstock mandray US $ 100m avy George Soros mba bola blockchain tetikasa sy ny maro hafa
Overstock.com vao nahazo ny fiovana goavana chunk avy amin'ny iray amin'ireo lehibe indrindra eo amin'ny fitantanam-bola anarana, ary hoy ny Tale Jeneralin'ny Patrick Byrne be izany dia bola ny orinasa asa blockchain.
Ny orinasa nampahafantatra tao amin'ny Fiarovana sy Exchange Commission (SEC) mitanjozotra amin'ity herinandro ity fa ny mpihazona ny didy fampisamborana efa naneho ny zo hividy $100 tapitrisa danja ny mizara. Na dia ny famenoana tsy hamantarana mpampiasa vola ity, Byrne nilaza CoinDesk dia atsangana hitondra Fund, mitantana ny miliaridera George Soros.
Blockchain News Janoary 7, 2018
Previous Post:Ny zava-nitranga manan-danja indrindra amin'ny 2017 ao amin'ny Crypto Community
Next Post:Ahoana no manova ny ICO Market in 2018?